सिंगापुरलाई हराउँदै नेपाल समुह चरणको बिजेता बन्यो – YesKathmandu.com
सिंगापुरलाई हराउँदै नेपाल समुह चरणको बिजेता बन्यो
काठमाडौं । एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन खेलमा नेपाल समुह चरणको च्याम्पियन बनेको छ । सिंगापुरलाई ७ विकेटले हराउँदै नेपाल समुह चरणको च्याम्पियन बनेको हो । लगातार तेस्रो जितसँगै नेपाल समूह एको विजेता बनेको छ ।
विहीबार सिंगापुरलाई ७ विकेटले हराउँदै नेपाल समुह ए को च्यापियन बनेको हो । सिंगापुरले दिएको ६८ रनको लक्ष्य नेपालले १३.४ ओभरमौ पुरा गरेको थियो । नेपालका लागि सन्दिप सुनारले २० र अनिलकुमार साहले १८ रन बनाए । त्यसैगरी आशिफ शेख ६ रनमा आउट भए भने अमित महर्जन १० र सन्दिप जोरा ७ रनमा अविजित रहे ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले २८.३ ओभरमा ६७ रन बनाएको थियो । नेपालका पवन सर्राफले ६ विकेट लिए । ८ ओभर बलिङ गरेका उनले ४ मेडन राख्दै मात्र १२ रन मात्र दिएका थिए ।
विनोदलाई विशेष छुट
साफ यू १९ च्याम्पियनसीपमा नेपाल च्याम्पियन
एशियन कप छनोट नेपाल र यमन भिड्ने
नेपाल र केन्याबीचको खेल बर्षाका कारण अवरुद्ध, नेपालको ३६ ओभरमा ११२ रन
नेपालको लगातार चौंथो हार
ओठमा लाली मुखमा गाली लिएर जव यी महिला मैदानमा उत्रिन्छन
नेपालले भारतलाई हराएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा लड्डु बाँडे
पूर्वकप्तान विनोद दासद्धारा सन्यासको घोषणा
‘यही नेतृत्व रहे अर्काे पटक कांग्रेस दोश्रो बाट तेश्रोमा झर्छ’
झापा क्षेत्र नं. १ बाट राम कार्की विजयी
विजया दशमीको दिन उपत्यकामा सेनाको नि:शुल्क बस सेवा (कहाँ कहाँबाट पाइन्छ सेवा ?)
स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्ने : अध्यक्ष कमल थापा